Wafdi kasocda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo gaarey Magaalada Cadaado - Awdinle Online
Wafdi kasocda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo gaarey Magaalada Cadaado
Degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud waxaa maanta oo sabti ah gaaray Wafdi ka socda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo iskugu jira Wasiiro, Gudoomiyaha Gobolka Doolo, Gudoomiyaha Galaadi iyo saraakiil Milatari oo kasocda Dawladda Faderaalka Itoobiya.
Duleedka Magaalada Cadaado ayaa waxaa ku soodhaweeyey wafdigaan Wasiiro katirsan Galmudug, Xildhibaano, Maamulka Degmada Cadaado, Odayaasha Dhaqanka iyo Saraakiil katirsan Ciidamada Dowladda Faderaalka Soomaaliya.
U jeedka safarka Wafdigaan ayaa ah dhamaynta hishiis laga gaarey Colaadii beelaha ee maalmo kahor kadhacdey Xuduuda ay wadaagaan Labada dawladood waxaana galinka danbe ee Maanta Madaxtooyada Cadaado lagu saxiixi doonaa hishiiskii laga gaarey colaadii labada beelood sida qorshuhu yahay.
Beello ka soo kala jeeda dhulka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo degmada Cadaado ee Gobolka Galgaduud ee Bartamaha Soomaaliya,ayaa laga guulaystay in xal hordhaca laga gaaro dagaal beeleedka ka dhacay xuduudka Gobolka Galgaduud la wadaago ismaamulka dhulka Itoobiya.
Ciidamado ka tirsan kuwa Xoogga dalka iyo Ciidamada Liyuu booliska ayaa ku guulaystay in ay kala dhexgalaan beelaha ku dagaalamay deegaanka laga magacaabo furinta fuuri oo dhaca Xuduud beenaadka labada Dowladood.
Previous articleAxmed Madoobe oo raadinaya qorshe kale oo aan ahayn dagaal si uu ula heshiiyo mucaaradkiisa
Next articleISU-SOCODKA GAADIIDKA GOBOLLADA IYO DEGMOOYINKA PUNTLAND OO LA MAMNUUCAY